Ireo toe-javatra ara-pitaovana dia mahazatra ankehitriny. Ho an'ny olon-dehibe iray, ny ankizy na ny mpihaino marobe, ny antoko antoko piraty dia hiverina ho andro mahafinaritra sy mahafinaritra. Fampisehoana feno ny lokon'ny jirom-borona amin'ny endrika somary mahery vaika, dia handrehitra ny mpihaino rehetra.
Pirate Party Features
Afaka mihazona fety toy izany ianao na dia ao amin'ny trano kely iray, na any amin'ny cafe na amin'ny natiora. Eo anoloan'ny fidirana dia ahantona paradisa ao anaty tranom-bato sy pirinty piraty. Ho an'ny vahiny, mila manomana akanjo am-paosy ianao: akanjo lava sy akanjo lava, akanjo , maso maso, pistols, sabers, daggers, baoty ambony, hatsikana pirate.
Ny feon-kira mozika tsara ho an'ny antoko piraty dia mety ho jazz, blues, ary koa hira avy amin'ny "Treasure Island". Ny menio dia tokony ahitana ny loha-hevitra an-tsoratra - lakandran-dàlana miaraka amin'ny sambo avy amin'ny poti-penina na tsiory, mofo vita amin'ny piraty, sandwiches amin'ny endriky ny sambo.
Ho an'ny antoko iray amin'ny fomba piraty ho an'ny olon-dehibe, ny fifaninanana mahatsikaiky dia mety tsara, izay tsy maintsy tanterahana amin'ny jono iray, dia mahaliana ny mifaninana amin'ny fisotroan-drongony, fanangonana vola madinika, mandamina fifaninanana dolara (baloney), fanamarihana ny lovia na teny pirate.
Ho an'ny fety iray ao amin'ny lamaody piraty ho an'ny ankizy, afaka mandamina fikarakarana harena amin'ny sarintany ianao, mividy aquagrim ary manintona tarehy sy maka sary, manome pirinty anaram-batana, mandamina fifaninanana, ohatra, iza no hahita vola madinika ao anaty vilia mitana haingana haingana, maka vatofantsika (manisy kofehy amin'ny pensilihazo) avy amin'ny antsantsa. Mora kokoa amin'ny fandehanana eny an-kalamanjana ny fifaninanana amin'ny dobo mavesatra, ohatra hoe iza no handalo ny tetezana.
Ny fahafahana handrehitra ny rivotry ny aventurism ary hahatsapa ho toy ny mahery fo amin'ny sarimihetsika ankafizinao dia hamela traikefa mahafinaritra sy tsy hay hadinoina ny vahiny rehetra.
Andro iraisam-pirenena mananotena
Taom-baovao amin'ny fomba fanosihosena
Hevitra ho an'ny fanomezana ny taona
Andro iraisam-pirenena ho an'ny mpitoraka blaogy
Inona no homena namana 18 taona?
Fifaninanana mahatsikaiky ho an'ny orinasa
Ny fanomezam-pahasoavan'ny lehilahy ho an'ny Taombaovao
Andro iraisam-poana poezia
Fanomezana tsara ho an'ny vehivavy
Fanomezana ho an'ny lehilahy iray ho an'ny Taombaovao
Fifaninanana ho an'ny lehilahy amin'ny orinasa
Andro ny mpitaingin-tsambo marika
Fistula amin'ny gamma - fitsaboana any an-trano
Leather Jackets - Lohataona 2015
Tontolon'ny gypsum ho an'ny fanomanana anatiny
Ternosliva - tsara sy ratsy
Ankinin'ny plastika ho an'ny ankizy
Macaroni - loza sy tombontsoa
Azo atao ve ny manamboatra serizy amin'ny serizy?
Baldewijn Seapark Park Amusement
Fiangonana ao San Miguel de Velasco
Roses - aretina sy bibikely
Ireo jirobe amin'ny ririnina amin'ny ririnina
Ketone ao anatin'ny fanasitranana zaza iray
Ny fon'ireo baolina sasantsasany
Demi-akanjo fitaratra - lamaody 2016
Mamony amin'ny tongotra amin'ny tongotra
Toe-trondro mahavariana amin'ny tulle
Sazy ho an'ny valizy